लाल कालीन 2016 मा लिन्डसे लोहान
हाम्रो समयको सबैभन्दा अपमानजनक अभिनेत्रीहरू लिन्डसे लोहान हुन्। यो उल्लेखनीय छ कि उनको बचपनमा उनी एक धेरै शान्त र सन्तुलित बच्चा थिए। त्यो विद्यालयमा धेरै राम्रो थियो। कसले सोचेको थियो कि पछि बढ्दै जाने बेला, उनीहरूले उनको चौंकानेक आङ्गीकहरूले जनतालाई शंका गर्नेछन्। निस्सन्देह, लोकप्रियता र विश्वव्यापी प्रसिद्धि यो प्रभावकारी छैन, र ठूलो शुल्कको उपस्थिति ड्रग र शराबसँग समस्याको कारणले गर्दा, कामुक फोटोसजनहरू र साथै कानूनी कार्यवाहीको कारणले गर्दा। यद्यपि, 2016 मा लिन्डसेन लोहान प्रायजसो रातो कालीनमा देखा पर्दछ।
उनको जीवनी को एक सा लिंडसे लोहान
भविष्यको तारा 1986 मा न्यूयर्कमा जन्मिएको थियो। धेरै उमेरदेखि, उनी प्रायः विभिन्न कास्ट्रेसहरूमा भाग लिन्थे, त्यसैले प्यारी रातो केटी, फ्रिकहरूसँग छिर्यो, उत्पादकहरू छिट्टै ध्यान दिए। लोहानको पहिलो हिसाबले व्यवसायिक विज्ञापनहरू थिए। वैसे, तिनीहरूले उनलाई विज्ञापन व्यवसायमा सबैभन्दा लोकप्रिय केटी बन्न अनुमति दिएका छन्। पहिले देखि नै उनको किशोरहरुमा, लिन्डसेले विज्ञापनहरू, विभिन्न टिभी शोहरू, रेडियो कार्यक्रमहरूमा देखा पर्ने धेरै प्रस्तावहरू पाएका थिए, जुन उनी व्यावहारिक रूपमा कुनै खाली समय थिएनन्।
लोहानको लागि ठूलो फिल्ममा पहिलो उल्लेखनीय कार्य फिल्म "आमाबाबुको लागि जाल" मा भूमिका थियो। पहिले उल्लेख गरिसकेपछि, सेटमा ठूलो रोजगारीको बावजूद, केटी स्कूलमा धेरै राम्रो थियो र खेलकुदको लागि पनि समय थियो। अभिनेत्रीले आफुलाई गायकको रूपमा पनि प्रयास गरे। त्यसपछि सफलताले स्टारलाई बाटोबाट बाहिर फाल्दैन, र उनले अभिनय र संगीत क्षेत्रहरूमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहे।
तथापि, एक व्यस्त समय तालिका र निरन्तर तनावले अन्ततः लिन्डेले ड्रग्स र बलिममा निम्त्यायो। बीस चलचित्रहरु भन्दा अधिक अभिनेत्री को फिलिमोग्राफी मा। यसको अतिरिक्त, उनी प्रसिद्ध कम्पनी "लुइस विइटन" को अनुहार हुन्। तिनको संगीत एल्बमहरू पनि धेरै मामिलामा छन्।
व्यक्तिगत जीवन अभिनेत्री
विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री र गायक लिन्डसे लोहानको व्यक्तिगत जीवन प्रेसको नजिकको ध्यान हो। तथापि, केटी आफै, स्पष्ट रूप देखि कम से कम चिन्ता छैन, किनकी त्यो प्रायः पर्याप्त छलफल को कारण दिन्छ। अभिनेत्री प्रसिद्ध र धनी मान्छे संग धेरै अपमानजनक सम्बन्ध थियो, तर तिनीहरू सबैलाई नशेको कारण बिग्रिएको थियो, जसबाट उनी धेरै पटक विशेष क्लिनिकमा उपचार गर्थे।
सौभाग्यवश, अतीत र लोहान आफैंको सबै अशाध्य क्षण धेरै खुशी छ कि उनको जीवनमा यस्तो कठिन समय पछि छ, तर उनी अझै संकटको सामना गर्न सफल भए। फिलहाल, अभिनेत्री उनको जवान मान्छे, अर्थात् रूसी व्यापारी यिजोर टैरासाववको धेरै सहयोगी हो। यसबाहेक, लिन्डसेले सक्रियतामा सक्रिय रूपमा संलग्न भए।
2016 मा लाल कालीन मा लिन्डसे लोहान
पहिले, अभिनेत्री सार्वजनिक रूपमा आफ्नो भावना विपरीत सेक्समा देखाइएको थिएन। तर अहिले चीजहरू फरक छन् किनभने उनीहरूको नयाँ चुनेको एक विशेष कुरा हो। त्यसैले, 2016 को लागि लिन्डसे लोहान बारम्बार 22 वर्षीया प्रेमी प्रेमी योगोर संग लाल कालीन मा देखा पर्यो। साथसाथै तिनीहरूले अप्रिलमा एशियाई पुरस्कार 2016 भ्रमण गरे, जहाँ अभिनेत्री ध्यान केन्द्रित थियो, किनकी उनले एक पारदर्शी कपडाको छेउमा ब्रा राखेनन्।
14 सबै भन्दा राम्रा ताराहरू जसको साथ यो काम साँच्चै गाह्रो छ
13 प्रसिद्ध व्यक्तिहरु को बीच धोखाधड़ी
लिन्डसे लोहानले अन्ततः भिडियो खेल विकासकर्तासँग बहु-वर्ष परीक्षण गरे
यसबाहेक, लिन्डसे लोहान र उनको प्रेमीले लालसा को 2016 मा लाल कालीन मा चैरिटी बल क्युडेल बालबालिकाको बटरफलीमा देखाएको थियो, जहाँ उनी एक फर्श र एक उज्ज्वल लाल पेडीक्योरमा एक सुन्दर बेज ड्रेस थियो। तिनीहरू भन्छन् कि जोडि पहिले नै विवाहको लागि तयारी गर्दै छन्। खैर, हामी हस्तियों को व्यक्तिगत जीवन को खबर को उम्मीद करेंगे।
मेल गिब्ससन पहिलो कान फिल्म फेस्टिवलमा आफ्नो प्रेमीसँग आए
एन्जिलिना जोली अफसोस गर्दछन् कि उनले 14 बर्षको उमेरमा उनको कुमारीता गुमाए
जस्टिन ट्रुडेऊ सजिलै जमी डर्नानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछन्!
मोडेलको साथ-आकारको विज्ञापन दुई टेलिभिजन च्यानलमा नामकरण गरिएको थियो ... गैर ढाँचा
कोर्टनी कार्दशियन जस्टिन ब्याबारी गर्भवती छ, जसको साथ उनले पहिले नै भाग लिइसकेको छ!
बेनेडिक्ट कम्बरब्याचले ब्रिटिश सरकारलाई अनावश्यक ठेगानामा पठायो
गायक राजकुमार को मृत्यु को कारण
क्रिस्टोफर हाइन र एम्मा रोबर्ट्स
एमिली Ratjakovski आफ्नो प्रेमीसँग रिसोर्ट मा आफ्नो जन्मदिन मनाईयो
बेला हरिदले आफूलाई नयाँ ट्याटू संग सजाय गर्यो
गर्भवती च्लो कार्दशियनले उनको प्रिय ट्रिस्टन थाम्पसनसँग एक कामुक फोटो शूटमा भाग लिइन्
सेलेना गोमेज र जस्टिन बेबेलको बीच भर्चुअल ड्युएल जारी छ
बेन एफिलकले पैसाको कारण जेनिफर गार्नर बाट बिदा लिन चाहँदैनन्
ब्रिटनी स्पीर्सले वी पत्रिकाको 100 औं अंकको कवरलाई सजाय दिएको छ
सारा जेसिका पार्कर उनको पहिलो बुटीको लुगा, जूता र सामान खोल्छ
चन्द्रोन - राशि को चिन्ह
ओवनमा बेक्ड केले
कलाकारले हाम्रो मनपर्ने टुप्पो खरगोश राक्षसहरूमा परिणत गर्यो!
30 जना जनावरहरू, जसले खानेकुरा खाएको थियो!
एक देश घर को साइट मा मार्ग
के यो ओस्टियोकोन्ड्रोसिस गर्न सम्भव छ?
ताजा गोभी किन उपयोगी छ?
सेलुलाइट को चरणहरू - कसरी "सुन्तला क्रस्ट" को विकास को सबै चरणहरु लाई पहिचान र उपचार गर्ने?
श्रीलंका - भिसा
पित्त लाग्ने उपचार के हो?
लोभी र आलु संग सब्जी स्टव
बैठक कोठामा वालपेपरको संयोजन
Sweet acidophilus राम्रो र खराब छ
डेभीड बेखमले केटा राइचिको उदाहरण पछ्याए र 22 पटक निचोड गरे
छेदका डरहरू - एक फोबिया वा एक बीमारी र कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ?
के डेनिम शर्टलाई के गर्ने?